Suuqa Sarifka Diamondbtc Oo Ah Suuq Lagu Kala Sarifto Lacaha Kiribto Iyo Lacagaha Mobile Money’ga ah ee ka jira Soomaaliya Oo Sheegtay.. – Kiribto Somali Media
Waxaa meeshii ugu saraysay tagay, markii ugu horeysa raadinta xarafka bitcoin ee bulshada soomaaliyeed radiyan, taasne waxay qeyb ka tahay kadib markii wadamada ka hooseya saxaraha, lacaga bitcoinka ah ee la isku dhaafsato ay aad usoo korortay.
Wadamada safka hore kujira marka ay noqoto google trend’ga waxaa ka mid ah Uganda, Nigeria, South Africa, Kenya, iyo Chana, suuqa sarifka lacagaha kiribto ee Diamondbtc ayaa ka howlgala wadamadan garahan Chana, Nigeria iyo Somalia waxana ka wareysanay bal isbadalka suuqa iyo kaalinta dhalinyarada soomaaliyeed ee suuqan iyo isbadalka xoogan eek u yimid la dhaqanka bitcoin iyo lacagaha kiribto.
Dr Bile Ahmed Kabah, Gudoomiyaha Diamondbtc ee soomaaliya ayana shabakada kiribto somali tv, uga waramay kobaca dhalinyarada soomaaliyeed ee dhinaca bitcoin, oo hada la dareemayo sida ka muuqata garafkan.
Gobolada banaadir, jubbada hoose, waqooyi galbeed, ayaa hormuudka ah raadinta xarafka bitcoin waxaadna dareemeysaa in garafku kor cirka isugu shareeray balsi aan xaqiiqda u ogaano, ayan waxka waydiinay, Dr Bile Ahmed Kabah, Gudoomiyaha Diamondbtc ee soomaaliya halkan ka daawo wareysiga oo dhameystiran.
Dr Bile Ahmed Kabah, Gudoomiyaha Diamondbtc ee soomaaliya
Sacdiyonuur	Jul 04, 2020
Maashaa,Allaah website kaan warar iyo macluumaad fiican ayaa ku jira su,aal maku weydiinkaraa adigoo raali ah.
Waxaan ka mid ahay dadka kucusub reer crypto. Waxaan leeyahay Blockchain.
Waxaan maalgashtaa website yada qaarkood
waxaan rabaa macluumaadyo dheeraad ah
Oo kusaabsan habka maalgashiga iyo lacag kalabixida..mahadsanid,